မမေ့နိုင်သော ထပ်တလဲလဲ ခရီးစဉ်
1524 days ago	(http://ywartharlay-ytu.blogspot.com)
ကိုဂျူလို	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ကိုဂျူလို">
1524 days ago	(http://feedproxy.google.com)
အဖွားပြောသော သမိုင်းပုံပြင် နှင့် ကျမ မ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: အဖွားပြောသော သမိုင်းပုံပြင် နှင့် ကျမ မ">
Myanmar Model Girl, Ei Shwe Zin Phyo with pretty golden dress
1525 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Ei Shwe Zin Phyo is Myanmar new read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Ei Shwe Zin Phyo is Myanmar new ">
Internet Usage Statistics From StatOwl
1525 days ago	(http://feedproxy.google.com)
StatOwl isawebsite presenting internet usage statistics inacomprehensive way.There are various reports that will be helpful to anyone into web design & web marketing like:web browser’s market sharespercentage of Flash, Quicktime versions installedoperatin	read more » Discuss Add this link to... Bury
IC Show in japan
1525 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
ဧပြီလ ၂၆ ရ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ဧပြီလ ၂၆ ရ">
Switching Images With Style: ImageSwitch
1526 days ago	(http://feedproxy.google.com)
jQuery has built-in animations & effects. But when it comes to switching between2objects, you may need to codealittle more foraflawless display.ImageSwitch is an easy to use jQuery plugin for switching between images using effects.The plugin supports various effects like	read more » Discuss Add this link to... Bury
Phuket Part(3) @ Maya Bay
ကျွန်တော် တို. နေတဲ့နေရာက Phuket မြို.ပေါ်မှ ကမ်းခြေပေါင်းများစွာအနက်မှ လူအစည်ကားဆုံးဖြစ်တဲ့ Patong beach မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်နေပေ့ါလေ ညက တိုင်ပတ် ထားလို. အဲလေ မှားလို. မြို.ထဲ လျှောက်ပတ် ထားတာ ပင်ပန်းနေတယ်။ မနက် ၂နာ၇ီ ခွဲလောက်မှ အိပ်ပြီး မနက် ၆ နာ၇ီ ခွဲ ထရတယ်။ Hotel က ကျွေးတဲ့ Breakfast ကို.	read more » Discuss Add this link to... Bury
ဘာလဲ QS ( Quantity Surveyor ) ဆိုတာ...
1525 days ago	(http://www.artsof-greengirl.com)
Quantity Surveyor တဲ့...။ မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် အရည်အတွက်ကို တိုင်းတာသူပေါ့လေ။ ထားပါ။ QS ဆိုတာကို QS လို့ပဲ ဒီနေရာမှာ မှတ်ထားကြပါစို့။ အဲ့ဒီ QS ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မြန်မာပြည်မှာတော့ အသုံးတော်တော်နည်းပါတယ်။ တခြားသော နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ နေရာယူသလဲ မသိပေမယ့် စင်္ကာပ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: | Bookmarks « previous1...567891011121314...105 next »